Ny fahatsaran’i Suso sy ny fahamendrehan’olombelona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Desambra 2007 6:43 GMT
Lahatsoratra nivoaka tao amin’ny Rising Voices.
Ataoko fa na aiza na aiza dia ahitana avokoa ireny olona manana ny lazany na amin’ny tsara na amin’ny ratsy ireny avokoa, noho ny talentany, ny toetrany na noho ny tantarany manokana. Olona (maningana) manana fiainana toa miavaka toy amin’ireny tantara voasoratra na voalahatsary ankafizintsika fatratra ireny. Eritereto hoe tahaka an’i Boo Radley ao amin’ny lahatsary To Kill a Mockingbird (Fomba hamonoana vorom-panesoana iray), Aureliano José ao amin’ny lahatsary One Hundred Years of Solitude (Zato taona naha- irery) , na ry Katerina Ivanovna Verkhovtseva ao amin’ny lahatsary The Brothers Karamazov (Ry Karamazov mirahalahy avy).
Ny olona anisan’ny tena malaza indrindra ao San Javier La Loma, vohitry ny mpiasa manodidina ny faritry Medellín, dia izany « RaSuso Voretra » izany, fa anisan’ny tena ankamantatra ho an’ny olona ny fomba fiainany vao tsy ela akory izay. Isaorana etoana ny asan’ny HiperBarrio, famoaham-baovaon’ny olom-pirenena ary tetikasan’ny Rising Voices eny an-kianja fa lasa fantatra ao an-toerana sy manerantany ankehitriny ny tantaran-dRaSuso Voretra. Niara-nanantontosa sy namoaka lahatsary fanadihadiana tamin’ny teny espaniola momba an-dRaSuso Voretra, mpanangona (mahery loatra ve ny voambolana hoe mpitsindroka?) zavatra (fako) mbola azo ahodina hanaovan-javatra vaovao ao La Loma moa ireto mpanao gazetin’olom-pirenena manaraka ireto : Yuliana Isabel Paniagua Cano, Catalina Restrepo Martínez, ary Gabriel Jaime Venegas. Mbola ambiny fotsiny aza ny namoahana ny lahatsoratry ny HiperBarrio momba an’i Suso ho eo amin’ny pejy voalohan’ny gazety mpivoaka isan-kerinandro Conexion.
Manana olona maningana tahaka ny tanàna hafa ao Antioquia ihany koa ny tanànan’i La Loma, dia ireo olona ho tadidin’ny isa-taranaka. Ny tanora miantso azy ho “RaSuso Voretra”. Fa ny lehibe izay efa nahita azy teny an-dalambe kosa hatramin’ny fahakeliny, izany hoe ireo efa mihoatra ny 40 taona kosa miantso azy hoe zanaky “Pachito.”
Manuel Salvador no tena anarany, ary izy no faralahin’Atoa Francisco Pizarro sy Rtoa Esperanza Sierra. Ary teraka tamin’ny 26 Oktobra 1929 tao an-tanànan’i Armenia ao Antioquia izy.
Na dia efa mananika ny faha-78 ny taonany aza izy dia mbola mifofotra miasa hatrany ary mahatsapa ny tenany ho mbola ilaina. Hatramin’ny fahatanorany no efa nianarany niasa tamin’ny angadin’omby, nisafo na niandry tanimboly lehibe ary nifantina voankafe. Efa nisy koa fotoana nahapandatsaka biriky (mpanao trano) azy talohabe, asa nianarany amin’ny mahampianadraharaha azy. Ankehitriny dia ampiarahiny ny asa mahatantsaha azy sy ny fitsindrohana kapoaka sy tavoahangy noho ny tsy fananany fidirambola hafa. Mahazo vola anelanelan’ny 500 ka hatramin’ny 1000 pesos (USD 2.50 ka hatramin’ny USD 5.00) isan’andro eo ho eo izy. Tsy sahinay kosa ny nanontany azy hoe ahoana indray ary no handaniany ny vola azony.
Hatramin’ny nifindran’i Suso niaraka tamin’ny ray aman-dreniny sy ny zokiny lahy tao La Loma dia nanofa trano akaikin-dRtoa Blanca Tejada na fantatra ao an-toerana amin’ny anarana hoe “Blanca Curra.”( Rafotsy manintona?) ihany koa.
Fotoana maro lasa izay dia novainy ho efitra fatoriana ny lakozia fandrehetan-kitay, ary nanomboka tamin’izay fotoana izay dia nanomboka nirodana tsikelikely ny trano. Efa lasa ny tafon’ny efitra efatra amin’ny enina amin’ny trano. Dia nisy koa fotoana notapahin’ny sampan-draharaham-panjakana ny jiro sy ny rano tao aminy, tsy miasa intsony ny toeram-pidiovany ary ny rano kely mba sotroiny, isasany ary hanasany lamba dia avy amin’ny ranon’orana na izay atolotry ny manodidina azy avy amin’ny daba. Midika izany fa ao anatin’ny ambina sokajin’olona (dingana faharoa izany hoe tsy laharam-pahamehana araka ny fahazoako azy) no ametrahan’ny SIBSEN azy, izany hoe ny sampan-draharaha mikarakara ny fahasalamana sy ny olona sahirana ao amin’ny firenena, nefa dia tena mifandaka vola kely mba azony izany sokajy ametrahana azy izany.
Mandamina zavatra manodidina ny tranony i Suso isan’andro mba tsy hahakotsa azy. Maro kokoa ny rano mirotsaka ao an-tranony noho ny ivelany. Lena avokoa ny fananany ao an-dalantsara sy ao an’efi-tranony misy ny fanidiana tsy ahafahana mangalatra ny ao aminy. Efa lasan’ny mpangalatra avokoa manko izay zavatra manantsanda rehetra tamin’ny fitaovam-piasany, ny fanaka (tavimbonikazo) ary ny kojakojam-pikarakarana sakafo. Nanomboka taminzany fotoana izany dia naleony napetraka tany amin’ny mpifanolo vodirindrina amin’ny ny kara-panondrony rehefa manao zavatra any ivelany izy.
Hita taratra eny amin’ny endriny ny taona maro izay nodiaviny feno fahantrana sy honjohonjony irery mandrakariva. Tsy mahita intsony ny masony havia. Mbola te-hiasa mandrakariva anefa izy na dia eo aza izany fahasarotana mahazo azy izany. Tena manana fahamendrehana noho ny olona maro hafa fantatray tokoa izy. Mbola mahatsapa ny tenany ho matanjaka sy sambatra izy ary tsy mihevitra ny hiditra any amin’ny toerana fikarakarana ny Beantitra raha tsy any amin’ny faha 190 taonany any farafahakeliny.
Afa-miteny izahay izao fa misy ny tena mahantra dia ireo izay tsy manana afa-tsy vola. Fa i Suso kosa manana ireo mpifanolo vodirindrina aminy izay mahatsapa fa ny fahantrana faratampony dia ny tsy fananana namana eto ambonin’ny tany, ny tsy fisian’ny fitiavana ary ny tsy fahaizana maneho firaiketam-po. Na ny fahantrana faratampony ihany koa dia ny fifohazana maraina ka tsy misy miraharaha anao na efa maty ianao na mbola velona.
Mba manana havana ihany i Suso saingy midify azy hatrany ireny fa ny omby mahia tokoa tsy lelafin’ny namany. Soa ihany fa maro ireo olona malala-tanana manome sakafo ho azy sy mikarakara azy ary mijanona eo anilany rehefa marary izy.
Amin’ny ankapobeny dia mifoha maraina be izy hifantina voankafe na hiasa ny tany (amin’ny angadin’omby), mioty akondro na izay mety ho vokatry ny tany. Isaky ny Sabotsy izy no manangona ireo zavatra mbola azo ahodina ho vao satria io no andro handraofan’ny fiara manokana ny fako.
Isaky ny alahady hariva amin’ny 6 ora kosa no andehanany mivavaka ao amin’ny fiangonana San Vincente Ferrer ary tsy mbola nanabanga fotoana mihitsy izy hatramin’ny niorenany tamin’ny taona 1961. Ny ray aman-dreniny no nanome ny tany hanorenana io fiangonana io ary efa misy ny fanorenana telo mampiavaka an’i La Loma ankehitriny, satria eo koa manko no misy ny Lisea Loma Hermosa sy ny trano famakiam-boky La Montaña.
Andiam-pianatra 17 (fa tsy hoe 17 isa) no efa nahazo diplaoma nivoaka avy tao amin’ny Lisea Loma Hermosa hatramin’ny taona 1985 niorenany. Tao avokoa no nandray ny sakramenta ny ankamaroan’ny mponina ao La Loma. Hatramin’ny 1 Aprily 1961 dia nahatratra 5 789 ny isan’ny vita batisa. Izy ireo ihany koa no mandrafitra ny mpampiasa anarivony ny trano famakiam-boky La Montaña izay trano famakiam-boky fitaratra ho an’ny Amerika latina, trano famakiam-boky izay manampy an’i La Loma hatramin’ny 1961 ary mendrika hoderaina amin’izany ny fandraisan’ny fokonolona ny andraikitra nanorenana azy.
Dia mahavariana tokoa raha ny tany misy ny fanorenana telo ivorian’ny mpiara-monina, nifankazaran’izy ireo ary nahazoany tombony teo amin’ny lafiny kolontsaina, fivavahana ary fanabeazana dia tokony ho tany lovan’i Suso.
Mba mila farafaharatsiny trano tsy mitete fa azo ialofana ary misy jiro sy rano ary ny tolotra fototra i Suso, ilay mpifanolo vodirindrina amiko, aminao, amintsika rehetra. Tonga ankehitriny ny fotoana hijoroan’i La Loma sy ny mpitondra ao aminy maneho fankasitrahana ny fianakaviana, nahavita zavatra be dia be ho an’ny manodidina azy tamin’ny alalan’ny fanomezana tany, nipoiran’i Suso.
Tsy hoe tsy ilaina ny fangoraham-po; ny kendrena eto dia ny hitadiavana ny fanatsarana ny fiainan’olona iray, izay efa nahavita be, mitondra ny anaran-dray aman-dreniny (sarotra ny dikanteny eto fa izay no hitako akaiky indrindra), ary mendrika hajaina izy sady efa antitra rahateo.
Rehefa tsy taitran’ny zavamisy intsony isika, rehefa manadino manontany, mamaha olana na mianatra zavabaovao, dia mety ho 40 taona nipetrahana tao an-tranontsika vao hahita fa hay ve misy hazobe manoloana ny trano e!
Oadray re ry zareo! Efa zary ekentsika fa efa tafiditra ao anatin’ny natiora avokoa ny toeram-pitobian’ny fiara, ny lalambe, ny sekoly, ny fiangonana, ny fikambanana ara-tsosialy ary ny trano famakiam-boky. Nefa dia ao anatin’ny tontolo iainana ihany koa anie ny olona. Hita manko fa efa hatramin’ny ela no nahateo azy ireo.
Talohan’ny nahavitan’ity fanadihadiana ity dia nanana fitsarana ivelany ny olona matetika isika (na izahay). Mandrakariva dia saiky tsy fantatsika akory hoe ahoana moa no nahatonga azy amin’izao toerana misy azy izao.
Niara-nandika ny lahatsoratra i Eduardo Ávila sy i David Sasaki.
Soratra miverina: Malag@sy Miray | Ho fanavotana olo-mahantra iray!
[…] tantarany amin’ny tenim-pirenena rehetra izay tratra, ary efa vita ny anjara kelin’ny teny malagasy azonao vakiana eto. Dia manentana anareo mahay tenim-pirenena maro handika iihany koa ity tantara iray ity raha azo […]
28 Desambra 2007, 08:27
Soratra miverina: Global Voices amin´ny teny malagasy » Blog Archive » Enimbolana voalohan’ny Rising Voices
[…] vohitry ny sarangan’ny mpiasa manodidina an’i La Loma any Medellín, Kolombia. Vakio ny tantaran’i Suso – mpanangon-javatra azo ahodina any La Loma (ihany). Andeha mihaona amin’i Cristina Quisbert […]
02 Janoary 2008, 10:17